Real Madrid Oo Iska Xaadirisay Wareegga 16ka, Inter Milan Oo Laba Saacadood Kaddib Dabbaal-degtay Iyo Liverpool Oo Ku Durdurisay Porto - Laacib
HomeWararka Champions LeagueReal Madrid Oo Iska Xaadirisay Wareegga 16ka, Inter Milan Oo Laba Saacadood Kaddib Dabbaal-degtay Iyo Liverpool Oo Ku Durdurisay Porto
Real Madrid Oo Iska Xaadirisay Wareegga 16ka, Inter Milan Oo Laba Saacadood Kaddib Dabbaal-degtay Iyo Liverpool Oo Ku Durdurisay Porto
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa usoo gudubtay wareegga 16ka tartanka Champions League, waxaanay sidoo kale gacanta soo qabatay oo ay soo saartay Inter Milan, kaddib markii ay 3-0 ku garaacday kooxda reer Moldova ee Sheriff FC oo ay marti u ahayd.
Carlo Ancelotti ayay kooxdiisu hoggaanka u qabatay Group C iyadoo yeelatay 12 dhibcood, waxaanay usoo baxday wareegga xiga, sidaas oo kalena Inter Milan oo fiidkii 2-0 ku garaacday Shakhtar Donetsk ayaa kala soo baxday hormadan.
Guusha Real Madrid ay gaadhay ayaa caawisay Inter Milan oo afar dhibcood ka horreysa Sheriff oo kaalinta saddexaad ku jirta, taas oo aan xataa soo gaadhi karayn haddii ay badiso kulanka u hadhay.
Saddex gool oo ay kala dhaliyeen David Alaba, Toni Kroos iyo Karim Benzema ayaa Real Madrid siiyey guul raaxo leh oo ay kala soo laabteen safarka ay ku tageen Moldova.
Xiddiga reer Austria ee David Alaba ayaa laad xor ah hoggaanka ugu dhiibay Real Madrid daqiiqaddii 30aad, taas oo kusoo dhacday difaaca Sheriff kaddibna goolhayaha dhinaca qaldan u dirtay.
Toni Kroos ayaa kubbad gantaal ah dhex birta ku argagax geliyey kooxda yar ee kasoo naxsatay ciyaartii hore ee ka dhacay Santiago Bernabeu oo guul-darro lama filaan ah u xambaarisay.
Kubbad uu ka toogtay bannaanka ayuu Toni Kroos birta kaga gariirsiiyey, kaddibna waxay ku dhacday dhulka iyadoo ka gudubtay xariiqda, sidaas ayaanay qaybta hore ugu soo dhamaatay 2-0 ay hoggaanka la nasatay Real Madrid.
Los Blancos ayaa qaybta labaadna ku bilaabatay dardar xooggan, iyadoo isku dayaysay inay iska ilaaliso dhayalsi iyo dagnaan sidii kulankii hore ee labadan kooxood.
Weeraryahanka reer France ee Karim Benzema ayaa ciyaarta ka dhigay 3-0 daqiiqaddii 58aad, markaas oo uu bannaanka laynka kaga toogtay goolka kubbad uu usoo dhiibay Ferland Mendy oo uu tiigsi dheer ku sameeyey.
Carlo Ancelotti ayaa markii uu saddexda gool isku hubsaday waxa uu beddelay ciyaaryahannadiisa muhiimka ah, sida Dani Carvajal, David Alaba iyo Ferland Mendy maadaama ay kusoo fool leeyihiin ciyaaro adag oo sanka isku haya.
Sheriff oo ay ciyaarteedu ka dunsanayd khadka dhexe oo ay awood ku haysteen Casemiro, Kroos iyo Modric ayaa isku dayo samaysay, waxaanay tiro aan badnayn halis geliyeen goolka uu waardiyaha ka ahaa Thibaut Courtois.
Real Madrid ayay guushu ku raacday 3-0, waxaanay sidaas ugu gudubtay wareegga xiga iyadoo kulanka ugu dambeeya hormadan ay ballansan yihiin Inter Milan, taas oo ay uga baahan yihiin badis ama barbarro si ay kaalinta koowaad ugu soo baxaan.
Inter Milan ayaa iyaduna fiidkii hore waxay 2-0 ku karbaashtay Shakhtar Donetsk, hase yeeshee waxay u baahnayd in laga badiyo Sheriff FC si ay u xaqiijisan karto inay usoo gudubto wareegga xiga, taasna waxa ka caawisay Real Madrid oo karbaashtay kooxda reer Moldova.
Geesta kale, Liverpool ayaa guushii shanaad ka heshay kulankii shanaad ee xilli ciyaareedkan ay dheeshay, waxaanay 2-0 ku garaaceen FC Porto oo marti ugu ahayd Anfield Stadium.
Thiago Alcantara iyo Mohamed Salah ayaa guusha u go’aamiyey Liverpool, xilli uu tababare Jurgen Klopp isbeddello badan ku sameeyey safkiisa oo uu nasiyey qaar kamid ah ciyaartoydiisa muhiimkaah.
Liverpool ayaa waqti hore kaalinta koowaad kaga soo gudubtay Group B, waxaanay leedhaay 15 dhibcood, hase yeeshee FC Porto oo guul-darraysatay ayaa kusoo xigta oo 5 dhibcood leh, waxaana caawisay AC Milan oo 1-0 ku garaacday Atletico Madrid, taas oo keentay in labadan kooxood ee dambe ay iyaguna min afar dhibcood yeeshaan
Saddexda kooxood ee Porto, Atletico Madrid iyo AC Milan ayaa isku marnaan doona illaa ciyaarta ugu dambaysa.